| Prayer Warriors for Today's Battle! | Real Conversion
ဩဂုတ်လ ( ၉ ) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
ကျွန်ုပ်သင်ယူလေ့လာခဲ့ဖူးသမျှတွင် အရေးပါအရာရောက်ဆုံးအရာကားအဘယ်နည်း။ ခရစ်ယာန်ဘာသာသည္အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်ဟူသောအရာကိုသိမှတ်သည့်အချိန်တွင် ထို သို့ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ဆိုလိမ့်မည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် စစ်မှန်သောဘာသာဖြစ်ကြောင်း ကို လော့ခ်အိန်ဂျယ်ရှိ ပထမတရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၌ ဒေါက်တာတိမောသေလင်းထံက ကြားသိခဲ့ရသည်။ထိုသူသည် ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ်ယုံကြည်သည့် တရားဟောဆရာ ဖြစ်သည်။ လူတစ်ယောက်သည် ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ် လက်ခံယုံကြည်သောအခါ သီးခြားဖြစ်စေသည်။ သူသည် အခြားတရားဟောဆရာများထက် တမူထူးပြီး ပို၍မြင့်မြတ် သည်။
ဒေါက်တာတိမောတေလင်းသည် တရုတ်နိူင်ငံက သင်းအုပ်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူသည် အသက်ကြီးသည်အထိ အမေရိကကို မရောက်ဘူးပါ။ သူယုံကြည်ပြီးဟောကြားသော အရာမှာ "အသက်ရှင်သောခရစ်ယာန်ဘာသာ" ဟု ကျွန်ုပ်ခေါ်ဆိုသောအရာဖြစ်သည်။ သူသည် လူတွေက ပင်တေ့ကော်စတယ် သို့မဟုတ် ကာရေ့မက်တစ်ဟုခေါ်သောသူလည်းမ ဟုတ်သော်လည်း ဝိညာဉ်ပြည့်၀ခြင်း၊ နတ်ဆိုး၊ ကောင်းကင်တမန်၊ ဘုရားသခင်ထံက"သတင်း စကား"၊ ဆုတောင်းခြင်း၏စစ်မှန်သောအဖြေ၊ နိူးထမှုတွင် ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခြင်း စသည် တို့ကို ယုံကြည်သည်။ သူသည် "အသက်ရှင်သော" ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုလည်း ယုံကြည် သည်။ သူသည် တရုတ်နိူင်ငံ၌ ငယ်ရွယ်သောသင်းအုပ်လေးကဲ့သို့ သင်ယူလေ့လာခဲ့သည်။ သူ၏ဖခင်သည်လည်း ဘဝတစ်လျှောက်လုံး သင်းအုပ်ဆရာအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်သည်။
လူများစွာတို့က ကျွန်ုပ်အား "သင်သည် အသင်းတော်ကနေလာသည့် အခြားတရုတ် တရားဟောဆရာများထက် ဒေါက်တာလင်းနှင့်ပို၍ဆင်သည်" ဟုဆိုကြသည်။ ဒေါက်တာ Cagan က လွန်ခဲ့သောကြာသပတေးနေ့ကလည်း ထိုသို့ဆိုပြန်သည်။ ဒေါက်တာ လင်းကယုံ ကြည်သည့် "အသက်ရှင်သော"ခရစ်ယာန်ဘာသာယုံကြည်သည်အကြောင်း ချီးမွမ်းစကားကို ဆင်ခြင်မိသည်။
ထိုနှစ်ကာလများတွင် ထိုနေရာ၌ နေထိုင်ဖို့ရာ ကျွန်ုပ်အတွက် အလွန်ပင်ခက်ခဲသည်။ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်ရှိသည့်အချိန်တိုင်းတွင် လူဖြူကလေးသာ ထိုနေရာတွင်ရှိသည်။ သို့သော် ထိုနေရာတွင် နေထိုင်ဖို့ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ဖြစ်၍ ကျွန်ု္ပ်နေထိုင္ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သိရှိ ထားသမျှ၏အများဆုံးသည် ဒေါက်တာလင်းထံက သင်ယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ သူနှင့်ကျွန်ုပ် နည်းနည်းလေးမှ မကိုက်ညီကြပါ။ သို့သော် သူကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်စဉ်းစားသည်။ ကျွန်ုပ်သည် အသက်ရှင်သောခရစ်ယာန်ဘာသာကိုယုံကြည်သည်။
ဧဖက်ဩဝါဒစာ အခန်းကြီးခြောက်၏ဒုတိယပိုင်းကို နားလည်သဘောပေါက်လိုလျှင် ဒေါက်တာ လင်းကဲ့သို့ အမှန်တကယ် စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမည်။ ထိုကျမ်းပိုဒ်အားဖြင့် ရှုပ်ထွေးကြ သည် အနက်ဖွင့်ကျမ်းများစွာလည်း ဖတ်ခဲ့သည်။ ခဏနေကျရင် ဤသည်ကို ရှင်းပြရန် ကျွန်ုပ် ကြိုးစားမည်။ ဧဖက် ၆း ၁၀ ကို ဖတ်ရှုကြပါစို့။ Scofield Study Bible တွင် စာမျက်နှာ ၁၂၅၅ တွင် ရှိသည်ဟု ဆိုပါ။ အခန်းကြီး ၆၊ အပိုဒ်ငယ် ၁၀ မှ ၁၂ အထိဖတ်ကြားမည်ဖြစ်၍ ကျေးဇူးပြု ပြီး မတ်တပ်ရန်ပေးကြပါ။
ဤသည်မှာ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ဧဖက်မြို့ရှိခရစ်ယာန်များအား နောက်ဆုံးရေး သားချက်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကနဦးခရစ်ယာန်များအားပြောဆိုထားသည်ကို ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အား လုံးတွင်လည်း ကြီးကြီးမားမားလိုအပ်လျက်ရှိသည်။
၁။	ပထမအချက်၊ တမန်တော်က ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲအကြောင်းကို ပြောဆိုသည်။
"ကြွင်းသေးသောစကားဟူမူကား၊ ညီအစ်ကိုတို့၊ သခင်ဘုရားအား ဖြင့်၎င်း၊ တန်ခိုးတော်အရှိန်အားဖြင့်၎င်း၊ ခိုင်ခံခြင်းရှိကြလော့။ မာရ်နတ်၏ပရိယာယ်တို့ကို ဆီးတားနိူင်မည်အကြောင်း၊ ဘုရားသ ခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နက်စုံကို ဝတ်ဆောင်ကြလော့။ အ ကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည် အသွေးအသားရှိသောရန်သူတို့နှင့် ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြသည်မဟုတ်။ အထွဋ်အမြတ်တို့နှင့်၎င်း၊ အာဏာစက်တို့နှင့်၎င်း၊ လောကီမှောင်မိုက်၌အစိုးတရပြုလုပ် သော မင်းတို့နှင့်၎င်း၊ မိုဃ်းကောင်းကင်၌နေသော နတ်ဆိုးတို့နှင့် ၎င်း၊ ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြ၏။" (ဧဖက် ၆း ၁၀- ၁၂ )
ထိုင်နိူင်ပါပြီ။ တမန်တော်က ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်မြေပြင်တွင် အသက်ရှင်နေကြရကြောင်း ပြော ပြသည်။ ခရစ်ယာန်အသက်တာသည် စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေသည့်အသက်တာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် မာရ်နတ်နှင့်၎င်း၏အပေါင်းအပါတို့နှင့်တိုက်ခိုက်နေရပါသည်။ ဒေါက်တာ A. W. Tozer က ၎င်းရေးသားသောစာတွင် ဤလောက- ကစားကွင်း သို့မဟုတ် စစ်မြေပြင် ဟု သမုတ်ထား သည်။ ( ခရစ်ယာန်ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း၊ ၁၉၈၈၊ စာ- ၁-၄) ဒေါက်တာ Tozer က ဤသို့ဆိုသည်။
ကနဦးနေ့ရက်များတွင် လူတို့သည် လောကကြီးကို စစ်မြေ ပြင်တစ်ခုသဖွယ်မြင်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးတို့က အ ပြစ်၊ မာရ်နတ်၊ ငရဲတို့ကို စွမ်းအားတစ်ခုအဖြစ် ယုံကြည်ခဲ့ကြ သည်။ အခြားတစ်ဘက်မှာ ဘုရားသခင်၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် ကောင်းကင်ကိုလည်း ယုံကြည်ကြပါသည်။ သူတို့၏သဘောသ ဘာဝအားဖြင့် ဤအရာတို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆန့်ကျင်လျက်ရှိ ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးတို့က ရွေးချယ်မှုကိုပြုကြရသည်။ ကြားနေဝါဒမရပါ။ သေခြင်းကိုရွေးမလား၊ အသက်ရှင်ခြင်းကိုရွေး ချယ်မလားပေါ။ ကောင်းကင်ရွေးမလား၊ သို့မဟုတ် ငရဲကိုရွေး ချယ်မလား။ ဘုရားသခင်ဘက်သို့လာဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားလျှင် ဘုရား သခင်၏ရန်သူများနှင့်တိုက်ခိုင်ရင်ဆိုင်ရပါမည်။ တိုက်ခိုက်မှုသည် အမှန်တကယ်ဖြစ်ပွါးပြီး အဆိပ်ရှိသည်။ ၎င်းသည် [လောကကြီး] တွင် အသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးတိုက်ခိုက်ရမည့်စစ်ပွဲဖြစ် သည်။ ၎င်း၊ စာ-၂။
သို့သော် တိုဇာက ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ကာလတွင် ပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်းဆိုသည်။ သူက"ဤ လောကသည် စစ်မြေပြင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုမည့်အစား ကစားကွင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်းအရာသည် ဖန်တမင်တယ်ခရစ်ယာန်အများစုတို့က လက်တွေ့လက်ခံကြပါသည်" ဟုဆိုသည်။ (၎င်း၊ စာ ၄)
ဒေါက်တာ Tozer သည် မှန်ကန်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ယနေ့ဧဝံဂေလိခရစ်ယာန် များသည် နတ်ဆိုးနှင့်စာတန်များအကြောင်းကို မကြားလိုကြပေ။ သူတို့သည် မကောင်းသော အရာ၏စွမ်းအားအားဖြင့်လောကစစ်မြေပြင်ရှိ စစ်သားများဖြစ်ကြသည်ဟု မစဉ်းစားလိုကြပါ။ အကြောင်းမှာ သူတို့အများစုတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းမရရှိကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ သည် ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲအတွက် မျက်စိကန်းသောသူများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့က တမန်တော်၏ "သခင်ဘုရား၌ခွန်အားယူကြလော့" ဟုပြောဆိုသည်ကိုကြားကြသောအခါ အဘယ်အရာဆိုလို သည်ကို နားမလည်ကြပေ။ အဘယ့်ကြောင့် နားမလည်ကြပါသနည်း။ သူတို့သည် "သခင်ဘုရား၌" သခင်ယေရှုခရဏ်"၌"တည်မနေကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ထံပါး က ခွန်အားများကို မရယူနိူင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ အက်.ဒီ.အက်ဖ် Salmond က" ခွန်အားသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူပေါင်းစည်းခြင်းအားဖြင့်သာ ထိရောက်မှုရှိနိူင်သည်" ဟု ဆိုပါသည်။ ("ဧဖက်မြို့အသင်းတော်သို့ပေးစာ"၊ ဂရိဓမ္မသစ်ကျမ်းအနက်ဖွင့်ခြင်း၊ အတွဲ ၃၊ Eerdmans ၊ စာ- ၃၈၂ )
ဒေါက်တာ J. Vernon McGee က "သင်၏ခွန်အားနှင့်တန်ခိုးအားဖြင့် နတ်ဆိုးကို အနိူင်မယူနိူင်ပါ။ ရှင်ပေါလုက ဂရိစကားလုံးနှစ်လုံးကိုအသုံးပြုထားခြင်းအားဖြင့် ဖော်ပြထားပါ သည်။ ၎င်းတို့မှာ ဘုရားသခင်၏ panoplian (စစ်ဝတ်တန်ဆာ) သည် စာတန်၏ methodias ( ည်းဗျူဟာ၊ သို့မဟုတ် နည်းလမ်း ) ကို ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့လိုအပ်သည်။ 'ခရစ်တော်၌အား ယူ၍ရဲရင့်ခြင်းရှိကြလော့။' ၎င်းမှာ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တန်ခိုးရရှိနိူင်သည့်နေရာဖြစ်သည်" ဟုဆို သည်။ (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, အတွဲ ၅၊ သောမတ်စ်နယ်လဆင်ပုံနှိပ် တိုက်၊ ၁၉၈၃၊ စာ- ၂၇၈၊ ၂၇၉၊ ဧဖက် ၆း ၁၀၊၁၁ မှတ်စု)
သင်သည် ပထမခြေလှမ်းအနေဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ရန် ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ခရစ်တော်ထံပါးသို့လာရမည်။ ထို့နောက် ကားတိုင်တော်စစ်သားတစ်ယောက်အနေ ဖြင့် "သူ၏ကြီးမားသောတန်ခိုး" ကိုပိုင်ဆိုင်ထားစေရန် ထပ်ခါထပ်ခါ ဆုတောင်းရပါမည်။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ တမန်တော်က ကျွန်ုပ်တို့ရန်သူများအကြောင်းကိုပြောသည်။
ကျွန်ုပ်က ဧဖက် ၆း ၁၂ ကို ဖတ်ကြားမည်ဖြစ်၍ ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ်ရပ်ပေးကြပါ။
''ကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည် အသွေးအသားရှိသောရန်သူတို့နှင့် ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြသည်မဟုတ်။ အထွဋ်အမြတ်တို့နှင့်၎င်း၊ အာဏာစက်တို့နှင့်၎င်း၊လောကီမှောင်မိုက်၌အစိုးတရပြုလုပ်သော မင်းတို့နှင့်၎င်း၊ မိုဃ်းကောင်းကင်၌နေသော နတ်ဆိုးတို့နှင့် ၎င်း၊ ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြ၏။" (ဧဖက် ၆း ၁၂ )
ပထမနှင့်ဒုတိယရာစုက ခရစ်ယာန်များသည် ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ရှင်ပေါလုဖော်ပြထား သည့် မာရ်နတ်ကို အတော်ပင် သတိပြုကြသည်။ ကနဦးအသင်းတော်ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းတည်း ဟူသောစာအုပ်တွင် ဒေါက်တာ Michael Green က ထိုကနဦးခရစ်ယာန်များသည် ဤသို့ယုံ ကြည်ကြကြောင်းဆိုသည်။
လောကတစ်ခွင်လုံးနှင့် ၎င်း၌ရှိရှိသမျှသောအရာတိုင်းသည် နတ် ဆိုးများနှင့်ပြည့်နှက်လျက်ရှိသည်။ ယင်းမှာ ရုပ်တုသက်သက်မ ဟုတ်။ ရှိသမျှသောပုံသဏ္ဍာန်အားလုံးသည် ၎င်း၏ထိန်းချုပ်မှု အောက်တွင်တည်ရှိသည်။ သူတို့သည် နန်းပလ္လင်ပေါ်ထိုင်ပြီး ပုခတ်အလွဲခံရသည်။ လောကကြီးသည် ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်း ထားသောအရာအဖြစ်ရှိနေသော်လည်း ရှိရင်းစွဲ ငရဲဖြစ်သည်။ ဤငရဲနှင့်၎င်း၌ရှိသောမာရ်နတ်အလုံးစုံတို့ကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နိူင် ရန် ခရစ်ယာန်တို့သည် လက်နက်စုံကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ရန် အမိန့်တော်ရှိထားသည်။ ခရစ်ယာန်များက ယေရှုသည် မာရ်နတ် ၏အစွမ်းကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အနိူင်ယူထားပြီး ယင်းက ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်စေသည်ဟူသောယုံကြည်ဖြင့် ရင် ဆိုင်တိုက်ခိုက်သည်။ (Michael Green, Ph.D., ကနဦးအသင်း တော်က ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်း၊ Eerdmans, ၂၀၀၃၊ စာ- ၂၆၃၊ ၂၆၄)
ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ကာလတွင် ဒေါက် J. Vernon McGee က ဤသို့ဆိုသည်။
ရန်သူမှန် ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ နတ်ဆိုးအစွမ်းနှင့် အလုပ်လုပ်သူမှာ စာတန်ပင်ဖြစ်သည်။ စစ်မြေပြင်သည် အဘယ် အရပ်ဖြစ်သည်ကို သတိပြုဖို့လိုအပ်ပါသည်။ အသင်းတော်သည် ဝိညာဉ်ရေးရာစစ်ပွဲနှင့်ဆိုင်သည့်အမြင်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန်ပြန့်မသိ ရှိဟု ကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ( ၎င်း၊ စာ- ၂၈၀၊ ဧဖက် ၆း ၁၂ မှတ်စု)
ဒေါက်တာ Martyn Lloyd-Jones ကလည်း ထိုနည်းအတိုင်း ပြောခဲ့သည်။ သူက "ယနေ့တွင် အသင်းတော်ကိုမကောင်းဖြစ်စေသည့်အဓိကအချက်တစ်ခုမှာ မာရ်နတ်ကိုမေ့လျော့နေသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အသင်းတော်ကို ဆေးခပ်ပြီး၊ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေသည်။ အသင်း တော်သည် တိုက်ခိုက်မှုကို လုံးဝသတိမပြုပါ" ဟုဆိုသည်။ (ခရစ်ယာန်တိုက်ပွဲ၊ The Banner of Truth Trust, ၁၉၇၆၊ စာ- ၂၉၂၊ ၁၀၆ )
လွန်ခဲ့သောနှစ်က တောင်ပိုင်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော်က လူပေါင်း ၂၀၀၀၀၀ ဆုံးရှုံးရ သည်မှာ အံ့ဩစရာမရှိ။ ယခုနှစ်တွင်လည်း ထိုထက်ပိုများသည့်အရေအတွက် ထပ်၍ ဆုံးရှုံး ပြန်သည်။ ဤဧဝံဂေလိအသင်းတော်များဟုခေါ်သောအသင်းတော်များသည် အဝေးသို့သာ ထွက်ပြေးနေကြသည်။ သူတို့သည် အိုင်အက်အိုင်အက်စ်ကိုကြောက်ရွံ့နေကြသည်။ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးကိုလည်း ကြောက်ကြသည်။ သူတို့သည် အီရန်ကိုလည်းကြောက်ကြ သည်။ အိုဘားမားကိုလည်း ကြောက်ကြသည်။ အရာအားလုံးကို ကြောက်ကြသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၏တန်ခိုးတော်ဖြင့် ရစ်ပတ်ထားလျှင် ကြောက်ရွံ့စရာမလိုပါ။
၃။	တတိယအချက်၊ တမန်တော်က လက်နက်တန်ဆာအကြောင်းကိုပြောသည်။
အပိုဒ်ငယ် ၁၃ ကနေ ၁၇ အထိ ကျွန်ုပ်ဖတ်ကြားမည်ဖြစ်၍ ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ်ရ ပေးကြပါ။
"ထို့ကြောင့်၊ ခဲယဉ်းဆိုးယုတ်သောနေ့ရက်ကာလ၌ ဆီးတားနိူင်သ ဖြင့်၊ ကိစ္စအလုံးစုံတို့ကို ပြီးစီး၍ခံရပ်နိူင်မည်အကြောင်း၊ ဘုရားသ ခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နက်စုံကိုယူဆောင်ကြလော့။ သစ္စာ တည်းဟူသောခါးပန်းကိုစည်းလျက်၊ ဖြောက်မတ်ခြင်းပါရမီတည်း ဟူသောရင်အုပ်တန်ဆာကို ဝတ်ဆင်လျက်၊ ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ယှဉ် သောဧဝံဂေလိတရားကို ဟောပြောအံ့သောငှါ ပြင်ဆင်သောအ ဖြစ်တည်းဟူသောခြေစွပ်ကိုစွပ်လျက် ခံရပ်ကြလော့။ မာရ်နတ် ပစ်ခတ်သောမီးစက်လက်နက်ကို ကာသတ်နိူင်သောယုံကြည်ခြင်း တည်းဟူသောလွှားကိုလည်း ခပ်သိမ်းသောလက်နက်တို့အပေါ် မှာ ထပ်ဆင့်၍ ယူဆောင်ကြလော့။ ကယ်တင်ခြင်းတည်းဟူသော သံခမောက်လုံးကို၎င်း၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပါတ်တော်တည်းဟူ သော ဝိညာဉ်တော်၏တားကို၎င်း ယူကြလော့။"(ဧဖက် ၆း ၁၃-၁၇ )
တမန်တော်က "ဘုရားသခင်၏လက်နက်စုံကို ယူတင္ဝတ်ဆောင်ကြလော့၊ မလုပ်ပါ နှင့် ယူတင္ဝတ်ဆင်ပါ" ဟုဆိုသောစကားကို သတိပြုမိသည်။ လက်နက်စုံအားလုံးကို အခမဲ့ရ ယူနိူင်ပါသည်။ ဒေါက်တာ McGee က "လက်နက်စုံတိုင်းသည် ခရစ်တော်အကြောင်းကို ရည် ညွှန်းပြောဆိုထားသည်" ဟုဆိုထားပါသည်။ သူသည် သမ္မာတရားဖြစ်သည်။ (အပိုဒ် ၁၄က) သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း(အပိုဒ် ၁၄ခ) ဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ခြေကို စောင်မခဲ့သည်။ (အပိုဒ် ၁၅) ကျွန်ုပ်တို့၏ဒိုင်းလွှားဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းသံခမောက်လည်း ဖြစ်သည်။ (အပိုဒ် ၁၆) အားလုံးသည် အကွယ်အကာများဖြစ်ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ခရစ် တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အကွယ်အကာဖြစ်သည်။ သူ့ကိုယုံကြည်လက်ခံလျှင် ကယ်တင်တော် မူခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ သင်သည် သူ၏မျက်မှောက်တော်တွင်တည်ရှိနေသောကြောင့် ခရစ် တော်သည် ဤအကာအကွယ်များအားဖြင့် သင့်ကိုလုံးခြုံစေတော်မူမည်။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အကွယ်အကာဖြစ်သည်။ သင်သည် သူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားသောအခါ ကယ်တင် တော်မူခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။
ထို့နောက် တမန်တော်က "ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပါတ်တော်တည်းဟူသောဝိညာဉ် တော်တား" (အပိုဒ် ၁၇ ) ကို စွဲကိုင်ရန် မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ ထိုအတွက်ကြောင့်သာ သမ္မာကျမ်းစာ ကို ရနိူင်သလောက်ရရှိအောက်လေ့လာကျက်မှတ်ထားရသည်။ကျွန်ုပ်ဘဝအသက်တာတွင် လွန်ခဲ့သောအချိန်ကာလများက ကျက်မှတ်ထားခဲ့သောအရာများသည် ကျွန်ုပ်ထံသို့ပြန်လည် အမှတ်ရလာစေပြီး စာတန်ကိုအနိူင်ယူရန် အကူအညီပေးသည့်အချိန်များစွာရှိခဲ့သည်။ "မိမိ ချစ်သောသူအဖြစ်လက်ခံတော်မူသည်" (ဧဖက် ၁း ၆) ဟူသောစကားလုံးသည် ကျွန်ုပ်ထံသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ကယ်တင်တော်မူသောညကို လုံးဝမမေ့နိူင်ပါ။ ကျမ်းပိုဒ်ကိုကျက်မှတ်လေလေ၊ ဝိညာဉ်တော်ထားသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပါတ်တော်ဖြစ်သည်ဟူသောအရာကို ပို၍နား လည်လာလေလေဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အသက်တာ၏စံထားသောကျမ်းပိုဒ်မှာ ဖိလိပ္ပိ ၄း ၁၃ ဖြစ် သည်။
"ငါ့ကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့် ခပ်သိမ်း သောအမှုတို့ကို ငါတတ်စွမ်းနိူင်၏။"
ထိုကျမ်းပိုဒ်သည် ကျွန်ုပ်၏ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်အားနည်းခြင်းအတွက်လက်နက်အဖြစ်အသုံးပြု သည်မှာ နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်ကျော်ရှိလာပြီ။ ဆာလံ ၂၇ ၊ အထူးသဖြင့် နောက်ဆုံးအပိုဒ် နှစ်ခု သည် စိတ်ပျက်အားငယ်သည့်အခြေအနေမျိုးနှင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့သည့်အခါ လက်နက်သဖွယ် အကြိမ်များစွာအသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ သင်အလွတ်ကျက်မှတ်သင့်ပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းတိုက်ပွဲ တွင် သင့်အား အကူအညီပေးလိမ့်မည်။
၄။	စတုတ္ထအချက်၊ တမန်တော်က စစ်သူရဲအကြောင်းပြောပြသည်။
အပိုဒ်ငယ် ၁၈ နှင့် ၁၉ ကို ကျွန်ုပ်ဖတ်ကြားမည်ဖြစ်၍ ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ်ရ ပေးကြပါ။
"ကာလအစဉ်စိတ်နှလုံးပါလျက်ဆုတောင်းပဌနာပြုခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ ဖြင့် ဆုတောင်းကြလော့။ ထိုသို့ဆုတောင်းခြင်းငှါ အားမလျော့ဘဲ လျက်၊ ငါမှစ၍ သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့အဘို့ ဆုတောင်းလျက် စောင့်ရှောက်ကြလော့။ ငါသည် ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်သံကြိုး နှင့်ချည်နှောင်ခြင်းကိုခံလျက်၊ သံတမန်အမှုကိုပြုရသည်ဖြစ်၍၊ ထိုတရား၏နက်နဲသောအရာကို ဘော်ပြခြင်းငှါ ငါသည် နှုတ်ကို ရဲရင့်စွာဖွင့်လှစ်ခြင်းအခွင့် ရှိမည်အကြောင်းကို၎င်း၊ ထိုတရားကို ဟောပြောအပ်သည်နှင့်အညီ၊ ရဲရင့်စွာဟောပြောမည်အကြောင်း ကို၎င်း၊ ငါ့အဘို့လည်း ဆုတောင်းကြလော့။" (ဧဖက် ၆း ၁၈၊ ၁၉ )
ကျွန်ုပ်သည် Leonard Ravenhill ပြောဆိုသည့်အရာကို သတိရလျက်ရှိနေသေးသည်။ သူပြောဆိုသည့်နေရာကိုမူ မမှတ်မိတော့ပါ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးတွင် အမြစ်တည်နေပေ သည်။ Ravenhill က "ဆုတောင်းခြင်းသည် စစ်ပွဲဖြစ်သည်'' ဟုဆိုသည်။ ဆုတောင်းခြင်းသည် စစ်ပွဲအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြင်ဆင်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ ဆုတောင်းခြင်းသည်သာ စစ်ပွဲဖြစ် သည္။
ဒေါက်တာ Merrill F. Unger သည် Dallas Theological Seminary တွင် နှစ်ပေါင်း များစွာ ပရောဖက်ဆာလုပ်ဆောင်သူဖြစ်သည်။ သူက အလွန်ထူးခြားသာလွန်သည့် သမ္မာကျမ် စာနှင့်ဆိုင်သည့်နတ်ဆိုးဝါဒကို ရေးသားခဲ့သည်။ (Kregel Publications, ၁၉၉၄) ဇာတိပက တိတရားဟောဆရာအချို့က ထိုစာအုပ်သည် အလွန်အန္တရယ်ပေးသောစာအုပ်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ အန္တရယ်ရှိသောသူများမှာ သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြသည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်သည်။ သူတို့သည် နတ်ဆိုး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၊ ဆုတောင်းခြင်းတန်ခိုးကိုမသိပါဘဲ အဘယ် သို့ တရားဟောနိူင်ကြပါသနည်း။ လွန်ခဲ့သောနှစ်က တောင်ပိုင်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော်ထဲက လူပေါင်း ၂၀၀၀၀၀ ထွက်ပြေးသွားခဲ့သည်မှာ အံ့ဩစရာမဟုတ်။ လွတ်လပ်သောနှစ်ခြင်းအ သင်းတော်များက ၎င်းတို့၏တနင်္ဂနွေနေ့ဝတ်ပြုအစီအစဉ်ကိုပိတ်ထားရသည်မှာလည်း အံ့ဩစ ရာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ခြင်းအသင်းတော်များကလည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများကို လောက ကြီးထံသို့ ၈၈% လောက်ပေးလိုက်ရသည်မှာလည်း အံ့ဩစရာမဟုတ်ပါ။ နတ်ဆိုး၊ ဆုတောင်း ခြင်းအကြောင်းကို လုံးဝမစဉ်းစားသောတရားဟောဆရာများသည် ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသောမှားယွင်းသောအယူဝါဒများကို လုံးဝမရပ်တန့်စေနိူင်ပါ။ ကျော်ကြားလှ သောပညာရှင် ဒေါက်တာ Wilbur M. Smith က Unger ၏ နတ်ဆိုးနှင့်ဆိုင်သည့်စာအုပ်ကို တလေးတစားပြုမူသည်။ ဒေါက်တာ Smith က "ဤသည်မှာ ယနေ့ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းကိုလုပ် ဆောင်သောသူတိုင်း လက်ဝယ်ထားရှိသင့်သည့်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်" ဟုပြောခဲ့သည်။ (Unger ၏စာအုပ်နိဒါန်း၊ စာ - xi) ဒေါက်တာ Wilbur M. Smith သည် အလွန်မှန်ကန်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ထိုစာအုပ်ကိုသင်ဖတ်ရှုလျှင် သို့မဟုတ် ဝက်ဆိုဒ်တွင်ကြည့်လျှင် ထိုစာအုပ် ကို ဝယ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ထို့ပြင် မရှိသေးသည့် သင်းအုပ်များကိုလည်း လက်ဆောင် ပေးလိုက်ပါ။
ဒေါက်တာ Unger က " [ဧဖက် ၆း ၁၈၊ ၁၉ ရှိ] ဆူတောင်းခြင်းအထောက်အပံ့သည် အရင်းအမြစ်စစ်သူရဲ၏အပိုင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် အခြားလက်နက်စုံအဖြစ် သတ်မှတ်ရန်မဟုတ်။ ဧဖက် ၆ တွင် တွေ့ရသည့်ဆုတောင်းခြင်းသည် ပုံမှန်ထိခိုက်မှုဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် ရန်သူ[စာတန်] ကို အောင်နိူင် [နှိပ်ကွက်] ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်အတွက်သာအမဟုတ်၊ အခြားသူများအ တွက်ပါ အောင်မြင်ခြင်းကိုသိမ်းပိုက်ရယူသည်။ (၎င်း၊ စာ- ၂၂၃ ၊ ဧဖက် ၆း ၁၉၊ ၂၀နှင့်ပါတ် သက်သည့် မှတ်ချက်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအလေးအနက်ပြုသည်။)
ဗြိတိသျှသင်းအုပ်ဆရာဖြစ်သူ Paul Cook က ကောင်းကင်ဘုံမှကျလာသောမီး စာအုပ်ကို ရေးသားခဲ့သည်။ (Evangelical Press Books, ၂၀၀၉) လူတိုင်း လူတိုင်း ထိုစာအုပ် ကိုဖတ်ရှုလေ့လာသင့်ပါသည်။ သူက "ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က လန်းဆန် သောအရာကိုပေးရန် ထပ်ခါထပ်ခါ ဆုတောင်းသင့်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် စဉ် ဆက်မပြတ် တောင်းလျှောက်ပြီး ဆုတောင်းရမည်ဟု၍ဖြစ်သည်။ ကနဦးအသင်းတော်က ထိုသို့လုပ်ဆောင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရမည်။ ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင် ချက်အားလုံးသည် ထိုအရာပေါ်တွင် အခြေပြုထားသည်။ လန်းဆန်းခြင်းဟူသည်မှာ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ထံမှရရှိသော [တန်ခိုး] ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်၏တန်ခိုးတော်ထောက်ပံ့ပေးသောလန်းဆန်းခြင်းကို ဆက်လက်ရှာဖွေရမည်" ဟုဆို သည်။ (Rev. Paul E. Cook ၊ ကောင်းကင်ဘုံမှကျလာသောမီး ၊ သာမန်ထက်ထူးကဲ့သော နိူးထမှုအချိန်ကာလ၊ ၎င်း၊ စာ-၁၂၀၊ ၁၂၁ )
ထို့အချက်မှာ နေ့တိုင်း သင်ဆုတောင်းသင့်သောအရာ၊ အထူးသဖြင့် စနေနေ့အစာ ရှောင်ဆုတောင်းသည်အချိန်တွင် ဆုတောင်းရမည့် အဓိကအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာ John R. Rice က "သန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏တန်ခိုးသည် ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင် ခြင်းအဖြေအဖြစ်ရောက်ရှိလာသည်" ဟုဆိုသည်။ (John R. Rice, D.D., ဆုတောင်းခြင်း၊ တောင်းလျှောက်ခြင်းနှင့်လက်ခံရရှိခြင်း၊ သခင်ဘုရား၏ ဓါးပုံနှိပ်တိုက်၊ ၁၉၇၀၊ စာ- ၂၂၅ )
"ကာလအစဉ်စိတ်နှလုံးပါလျက်ဆုတောင်းပဌနာပြုခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ ဖြင့် ဆုတောင်းကြလော့။ ထိုသို့ဆုတောင်းခြင်းငှါ အားမလျော့ဘဲ လျက်၊ ငါမှစ၍ သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့အဘို့ ဆုတောင်းလျက် စောင့်ရှောက်ကြလော့။" (ဧဖက် ၆း ၁၈ )
ဆုတောင်းခြင်းသည် စစ်ပွဲျဖစ်သည်ကို သင်တွေ့မြင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ပျောက်ဆုံးသော သူများအဖို့ အသေးစိတ် နှင့် နာမည်ဖြင့် (ဖြစ်နိူင်လျှင်) ဆုတောင်းလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသင်း တော်ထဲသို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က ဧဝံဂေလိတရား၏အလင်းတရားကို စိတ်နှလုံးသား ထဲတွင် ချထားပြီး အပြစ်ကိုသိမြင်စေရန်၊ နှင့် အသွေးတော်မြတ်ဖြင့်အပြစ်များကိုဆေးကြော ခြင်းအတွက် ခရစ်တော်ထံပါးသို့နီးကပ်စေရန် ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းလိုသည်။ ဆုတောင်းခြင်းသည် စစ်ပွဲျဖစ္သည်။ ကျွန်ုပ်ကိုလည်း အဘယ်အရာကိုဟောပြောမည်အကြောင်း ဘုရားသခင်က ပြ သရန်နှင့် ကျွန်ုပ်၏တရားဟောကြားချက်ကိုအသုံးပြုလျက် မယုံကြည်သူတို့၏နှလုံးသားကိုတို့ ထိရန်၊ မိတ်သဟာရအစီအစဉ်ကို ခွန်အားတိုးစေရန် ဆုတောင်းလိုပါသည်။ ပြိုင်တူဆုတောင်း ရာတွင် တစ်ဦးဦးက ဦးဆောင်ဆုတောင်းသည့်အချိန်တွင် ထပ်လောင်းပေါင်းထည့်ရန် သတိပြု ပါ။ ထိုသူ၏ဆုတောင်းသည့်အရာပေါ်တွင် စိတ်နှလုံးကိုရောက်စေလျက် ဆုတောင်းခြင်းအဆုံး တွင် "အာမင်" ဟုပြောဆိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အစာရှောင်ဆုတောင်းသည့် စနေနေ့တွင်လည်း ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ပါ။ အစာရှောင်ဆုတောင်းသည့်အချိန်တွင် ဆုတောင်းနိူင်အောင် အချက်အလက် အချို့ကို ကျွန်ုပ်ပေးထားသည်။ အာမင်။ သင်သည် စာတန်နှင့်တိုက်ခိုက်ရာတွင် ဆုတောင်း ခြင်းအတွက် စစ်သူရဲဖြစ်သည်။ သင်သည် ကြီးမားသောသူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကောင်းကြီး ပေးပါစေ။
ပျောက်ဆုံးနေသေးသည့် သင်တို့အဖို့ အနည်းငယ်သောစကားကိုမပြောဘဲအဆုံးမ သတ်လိုပါ။ ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်မှ ကယ်တင်ပေးရန် ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံတော်မူခဲ့သည်။ အပြစ်သားများအား အသစ်သောမွေးဖွါးခြင်းနှင့်ထာဝရအသက်ကိုပေး ရန် ယေရှုသည် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်လုပ်ဆောင်ချက်မပါဘဲ ထိုအရာများသည် သင့်အသက်တာတွင် အမှန်တကယ်ဖြစ်လာ မည်မဟုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့်၊ တစ်ပတ်လုံးလုံး ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းသည့်အချိန်တွင် အပြစ်သားများအ တွက် မုန့်ကိုဆုတောင်းပါ။ သူတို့၏မှောင်မိုက်နေသောစိတ်နှလုံးကိုအလင်းပေးရန်နှင့် အပြစ် ကိုသိမြင်လျက်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုလိုအပ်စေခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအ စဉ်တွင် ဘုရားသခင်က သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုစေလွှတ်ရန် ဆုတောင်းပါ။ လုကာ ၁၁း၁၃ ကိုဖတ်ရှုကြပါစို့။ ၎င်းသည် Scofield Study Bible ၌ စာမျက်နှာ ၁၀၉၀ တွင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်က ဖတ်ရှုမည်ဖြစ်၍ အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပေးကြပါ။
"သင်တို့သည် အဆိုးဖြစ်လျက်ပင် ကိုယ်သားတို့အားကောင်းသော အရာကို ပေးတတ်လျှင်၊ ထိုမျှမက ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူ သော သင်တို့အဘသည် ဆုတောင်းသောသူတို့အား သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကို သာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လောဟု မိန့် တော်မူ၏။" (လုကာ ၁၁း ၁၃ )
၅။ မပြောင်းလဲသေးသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏လူငယ်များ၏ ပြောင်းလဲခြင်းအ တွက် ဆုတောင်းပါ။ ဟေရှာယ ၅၈း ၆ တွင် မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း သူတို့အတွက် လုပ်ဆောင်ရန် ဘုရားသခင်အား ဆုတောင်းပါ။
၈။ ရေများစွာ သောက်သုံးပါ။ တစ်နာရီလျှင် တစ်ခွက်စီ သောက်ပါ။ နေ့တိုင်းလက်ဖက်ရည် သောက်လေ့ရှိလျှင် အစပိုင်းတွင် မတ်ခွက် ကြီးဖြင့် ကော်ဖီသောက်သုံးနိူင်ပါသည်။ နူးညံ့သောအရည်၊ ပါဝါအ ရည် စသည်တို့ကို မသောက်သုံးပါနှင့်။ .
၁၀။	အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကို သောကြာနေ့ ညနေစာ စားပြီးသည့် အချိန်တွင် အစပြုပါ။ စနေနေ့ ညနေ ၅း ၃၀ နာရီအချိန်တွင် အသင်း တော်၌ အစာစားသည်တိုင်အောင် သောကြာနေ့ ညစာစားသည့် အချိန်မှစ၍ အဘယ်အရာ ကိုမျှ မစားပါနှင့်။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို မစ္စတာ Abel Prudhomme က ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဧဖက် ၆း ၁၀- ၁၉
"ကြွင်းသေးသောစကားဟူမူကား၊ ညီအစ်ကိုတို့၊ သခင်ဘုရားအား ဖြင့်၎င်း၊ တန်ခိုးတော်အရှိန်အားဖြင့်၎င်း၊ ခိုင်ခံခြင်းရှိကြလော့။ မာရ် နတ်၏ပရိယာယ်တို့ကို ဆီးတားနိူင်မည်အကြောင်း၊ ဘုရားသ ခင်ပြင် ဆင်တော်မူသောလက်နက်စုံကို ဝတ်ဆောင်ကြလော့။ အကြောင်းမူ ကား၊ ငါတို့သည် အသွေးအသားရှိသောရန်သူတို့နှင့် ဆိုင်ပြိုင်တိုက် လှန်ရကြသည်မဟုတ်။ အထွဋ်အမြတ်တို့နှင့်၎င်း၊ အာဏာစက်တို့နှင့် ၎င်း၊ လောကီမှောင်မိုက်၌အစိုးတရပြုလုပ်သော မင်းတို့နှင့်၎င်း၊ မိုဃ်း ကောင်းကင်၌နေသော နတ်ဆိုးတို့နှင့်၎င်း၊ ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြ ၏။" (ဧဖက် ၆း ၁၀- ၁၂ )
၁။	ပထမအချက်၊ တမန်တော်က ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲအကြောင်းကို ပြောဆိုသည်။ ဧဖက် ၆း ၁၀
၂။	ဒုတိယအချက်၊ တမန်တော်က ကျွန်ုပ်တို့ရန်သူများအကြောင်းကိုပြောသည်။ ဧဖက် ၆း ၁၂
၃။	တတိယအချက်၊ တမန်တော်က လက်နက်တန်ဆာအကြောင်းကိုပြောသည်။ ဧဖက် ၆း ၁၃-၁၇၊ ၁း ၆၊ ဖိလိပ္ပိ ၄း ၁၃
၄။	စတုတ္ထအချက်၊ တမန်တော်က စစ်သူရဲအကြောင်းပြောပြသည်။ ဧဖက် ၆း ၁၈၊ ၁၉၊ လုကာ ၁၁း ၁၃။